यो मात्र होइन पुग्लिआ तर इटाली को सबै भन्दा सुन्दर रिसोर्ट्स एक साथै युरोप मानिन्छ. Borgo Egnazia युरोप मा सबै भन्दा राम्रो सबै-समावेशी रिसोर्ट्स रूपमा गनिन्छ. Borgo Egnazia इच्छा परम्परागत तपाईंलाई आकर्षण वास्तु शैली तपाईं पुग्लिआ मार्फत देख्नु, साथै यसको सुन्दर सजाया कोठा रूपमा, पूल, एउटा गल्फ कोर्स, र पनि गतिविधि क्लब को लागी बच्चाहरु र किशोर. रेल द्वारा बारी वा ब्रिन्डिसि प्राप्त र त्यसपछि Savelletri di Fasano यात्रा, को लिइरहेको सुंदर मार्ग पुग्लिआ सबै सुंदरियों हेर्न.
इटाली भ्रमण गर्न धेरै सुन्दर ठाउँहरू छ, तर अमाल्फी कोस्ट इटालियनहरु को बीच एक मनपर्ने हो. र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो सबै-समावेशी रिसोर्ट्स को एक सही छ. सान पिएत्रो, यसको 57 कोठा र आकर्षक समुद्र तट-साइड रेस्टुरेन्ट तपाईं रूपमा धेरै प्रसन्न हुनेछ क्षेत्र को सौन्दर्य. तपाईं अमाल्फी प्राप्त गर्न केही द्रुत रेल सवारी बुक गर्न सक्नुहुन्छ, नेपल्स वा सलर्नो देखि - र सँगसँगै विचार आनन्द.
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने पहाड दृश्यहरु बरु sprawling को समुद्र तट, तपाईंले भ्रमण गर्न को लागि अस्ट्रिया गरेको हुन सक्छ युरोप मा सबै भन्दा राम्रो सबै-समावेशी रिसोर्ट्स एक Tyrolean आल्प्स. होटल Tannenhof प्रचण्ड पहाड दृश्य दावा, र यो छ एक ठूलो स्की घट्दैछ एक थोडा थप निजी वातावरण रुचि गर्नेहरूका लागि. तपाईं नाइस बाट सजिलै Ischgl पुग्न सक्दैन, ज्यूरिख, वा म्यूनिख - रेल Landeck गर्न हुनेछ, जो पछि रिसोर्ट छोटो ड्राइव दूर छ.
को मा कोरि-Resort Bavaria को सुन्दर क्षेत्र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो सबै-समावेशी रिसोर्ट्स बीचमा छ, विशेष गरी जब यो स्की लिफ्टहरु र राम्रो संग सुसज्जित कोठाहरु को रूप मा सुविधाहरु प्रदान गर्न को लागी आउँछ.
#सबै समावेशी रिसोर्ट्स #सबै समावेशी #रिसोर्ट्स #traveleurope europetravel रेल सुझावहरू रेल यात्रा रेल यात्रा यात्रा